Ampitomboy ny fiovam-po isan-tsindry
Mpanjifa mamoaka dokam-barotra karama fampiroboroboana a quote haingana ao amin'ny doka… ny antso dia alefa any amin'ny ivon-telefaona izay tsy misy ny teny nalaina. Oops. Ny mpanjifa iray hafa dia mihodina matetika ny teny fanalahidy satria tsy mahazo fiovam-po. Oay… ny endrika fividianana entana dia mandefa amin'ny pejy tsy hita. Mpanjifa iray hafa kosa mampiditra CAPTCHA amina endrika fitarihana… izay tsy mandeha mihitsy. Oops.
Ohatra daholo ireo izay nandany vola an'arivony dolara tamin'ny tetibola fikarohana karama. Tsy vitan'ny hoe nahazo fidiram-bola very mivantana izy ireo, fa nanelingelina koa ireo vinavina izay mety tsy hiverina intsony.
Rehefa tsy tanteraka ny varotra na ny fitarihana tranokala dia matetika ny orinasa no manondro ny azy ireo marketing an-tserasera fandraisana andraikitra amin'ny maha-olon-dratsy azy. Mety hahatratra ny tanjon'izy ireo ny fampielezan-kevitrao amin'ny Internet… saingy tsy mahomby noho ny tsy fahombiazan'ny famonoana any aoriana.
Ireto misy dingana 10 handresena ny fiovam-po amin'ny fikarohana karama
Hamarino tsara fa manana ianao Analytics vahaolana amin'ny toerany (ary ampiasao izany).
Tadiavo fanarahana ny tanjona (fantatra koa amin'ny hoe fanaraha-maso ecommerce). Raha ny tanjonao ihany no tadiavinao, dia omeo lanja ny tanjona tsirairay arahana.
hampavitrika corona fanovana tanjona isaky ny refy. Araho maso ny zava-bitan'ny loharano, fampielezan-kevitra, doka, teny lakile, ary ny lafiny hafa.
Ao anatin'ny AdWords, Ad Center, na kaonty hafa, alao antoka fa izany fanarahana ny fanovana mandeha ary miasa tsara.
zatra hamakafaka ny zava-bita metrika, tsy ao anatin'ny kaontinao ihany
Mametraha KPI fanampiny, ao anatin'izany tahan'ny fihenam-bidy, pejy eo ho eo isaky ny tsidika, ary ny salan'isa amin'ny tranokala isaky ny singa fampielezan-kevitra. Ny votoatiny ratsy eo amin'ny tranokalanao na ny pejy fitobiana dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fampielezan-kevitra.
Jereo ny fizotran'ny fizahana manokana na manana olon-kafa hanao zavatra a Mpivarotra tsiambaratelo mamoaka fahasahiranana.
Hizaha toetra ny fahaizanao hetsika feno tiana (azonao atao tsara ny mamita ny baiko amin'ny Internet na mangataka katalaogy / brochure, sns.). Misy dikany izany tsy avy amin'ny an mandeha ve izany fomba fijery, fa manampy anao hamantatra ny mety ho traikefan'ny mpampiasa / fampiasana azo ahitsy na hatsaraina.
Raha miantehitra amin'ny tombam-bidy mandroso amin'ny alàlan'ny a ny tahan'ny akaiky anao programa fikolokoloana, oh: mailaka na telefaona, diniho ihany koa ity. Averina indray fa tsy ny isan'ny hitarika anao no mamorona fa izay ataonao amin'izy ireo.
Mety hanatsoaka fehin-kevitra diso ianao momba ny fomba tsy dia heverinao fa mahomby amin'ny fampielezan-kevitrao raha manombatombana ny angon-drakitra misy azy ireo fotsiny fitsapana ny tranokalanao fahazarana.
Ny vidin'ny fahombiazana dia ny fiambenana maharitra mandrakizay. Hamarino tsara fa mandeha tsara ny raharaha! Ny tranokalanao dia ampahany amin'ny orinasanao fa tsy misaraka aminy. raha taratrafm zava-dehibe, aza mijanona amin'ny fanarahana ny habetsahan'ny fitarihanao, fa manaraha vokatra. Amin'ny tranga sasany, raha ilaina / ilaina ny fanatsarana, dia mety ny famonoana anao amin'ny Internet no olana. Aza manao vinavina.
Tags: foibe dokaadwordsfantsom-panovanafanaraha-maso ecommercecorona fanovana tanjonafanarahana ny tanjonakpistaratrafmfiraka bokyfanatsarana ny varotrafikarohana karamafanatsarana karokametatra fampisehoanappckaonty ppc
Febroary 8, 2011 amin'ny 1:17 PM
Lahatsoratra lehibe. “Araho izay tianao hatsaraina”
Mar 26, 2014 ao amin'ny 11: PM PM
Ity misy toro-hevitra ampiasaiko amin'ny orinasako eto an-toerana antsoina hoe fisarahana andro. nanangona vola be izahay fa nandamina ny dokam-barotray mba hiseho mandritra ny ora fiasana ihany. Heveriko fa misy tatitra (eo ambanin'ny tabilao refy raha tadidiko tsara) mamela anao hamakafaka ny CPC sy ny vidin'ny fiovam-po isan'ora isan'andro mba hahafahanao manao dokambarotra mandritra ny ora be indrindra. Nanomboka dingana iray hampitomboana ny tolotray izahay nandritra ireo ora faran'izay be indrindra mba hanosehana ireo mpifaninana anay nandritra izany fotoana izany ary niafara tamin'ny fampihenana ny fandaniana amin'ny ankapobeny izahay tamin'ny fanaovana izany koa hatramin'ny niantefany bebe kokoa. Raha ny marina dia manana ny namako Simon aho mitantana ny kaonty adwords, raha te hiresaka aminy ianao dia alefaso mailaka izy simon.b@resultsdriven.org na 302-401-4478. Lazao azy ny namanao miaraka amin'i Dean Jackson.